Vitamin C | Way Best inay Guide Ilkaha caddeeya aanu u caddayn
Helitaanka ilkaha qaadan kartaa lacag badan iyo waqti badan cunta. Waxaa jira wax badan oo ka mid ah hababka iyo technology iibsan maanta u caddayn ilkaha in dhaxayn karo oo dhan daawooyinka dabiiciga ah si aad u dambeeyay ee article technology.This tusi doono mid ka mid ah in uu akhriyo haddii aad rabto talooyin ilko-caddeeyo xaqiijiyay in si degdeg ah oo wax ku ool ah u shaqeeyaan.
Waayo, natiijada ugu dhaqsiyaha badan, doondoonaan adeegyada caddeeyo xirfadeed. Waxay noqon karaan qaataan booqasho gaaban, iyo natiijooyinka riwaayado socon doono muddo dheer. ilkaha caddeeyo isku The in ilkaha uu heli karo ka badan wax ku ool ah ka badan waxa aad ka heli kartaa marka aad dukaanka daroogada maxalliga ah waa.
TALO! Si loo dhowro caddaan, ilkaha nadiifiye, nadiifinta ilkaha oo joogto ah waa waajib ah. Hubi inuu la socdo aad lix ballamaha bishii by jadwal waqti badan ka hor.
A booqasho ilkaha yar in ilkahaaga caddaan. Ilkaha isticmaali kartaa caddeeyo nidaamka ilkaha oo aan la iibsan karaa in ka badan-the-counter.
Waxaad isticmaali kartaa strawberries in caddeeya aanu u caddayn ilkaha. The kor u samaynaysaa organic of strawberries caawin kara caddayn ilkahaaga aan kiimikada adag. strawberries dartaa in la sameeyo cadayga ah oo macmal ah, ama xoqin strawberries cusub si toos ah on ilkaha.
TALO! cuntooyinka ceeriin, gaar ahaan khudradda iyo midhaha ilkaha caafimaad. Warshadaha iyo cuntooyinka caafimaad qabin ma aha oo kaliya soo jeedin ilkaha huruud ah, laakiin sidoo kale waxay keeni kartaa suuska.
Liin iyo liin ku siin Vitamin C, laakiin waxay sidoo kale leedahay ilig-caddeeyo properties.Rub gudaha ee diirka ka dhanka ilkaha for saamayn caddeeyo khiyaano. Waxa kale oo aad ku dari kartaa wax yar oo cusbo qolofka ah si loo hagaajiyo natiijooyinka muuqda in habkan soo bandhigi doona.
Isticmaal tilmaamaha la socda waxyaabaha la caddeeyo. Halkii, waxay keeni kartaa xanjo iyo afka cuncun, iyo xataa sababi dhaawac ilkaha weyn. Isticmaal ilko caddeeyo waxyaabaha saxda ah oo keliya sida lagu faray baakadka.
TALO! Walax dabiiciga fudud laakiin waxtar leh waa baking soda. Qasmay biyo, waxay kaa caawin karaan caddayn ilkaha.
Waxa ugu horeeya ee muhiim ah marka la isku dayayo in ilkahaaga sii waa qaadan nadiifinta ilkaha habboon. Hel ilkaha nadiifiyo lix bilood kasta oo aad ballan mustaqbalka halka xafiiska nadiifinta aad hadda.
Waxa ugu wanaagsan ee aad sameyn kartaa isagoo dhoola caddaan waa inay si joogto ah u soo booqan dhakhtarkaaga ilkaha for nadiifinta. Joogto ah jadwal nadiifinta, kuwaas oo labo jeer sanad kasta. Marka aad samaysay la nadiifiyo a, qotomiyey ballan aad soo socda si aad ha iloobin. Hel xafiiska si ay kuu siiso waano by phone.
TALO! Ilkaha caddeeyo cadayga waa run ahaantii aan wax badan ka duwan cadayga ee caadiga ah. Ma run ahaantii fikrad ugu fiican ee lacag lumin on waxyaabaha aan ka dhigi doonaa wax badan oo isbeddel.
Cun cuntooyin caafimaad leh; cuntada cayriin sida miraha jira tusaalooyin kaamil ah. Ka dheerow ka noocyada kala duwan ee cuntada si loo hubiyo in ilkaha waa ilko caafimaad. Sidoo kale waa inaad ka fogaato qarsato markii gaarno dhoola fiican.
Cabitaanka iyada oo kale caws buu u yahay mid ka mid ah tabaha yar oo badan oo kaa caawin kara ilaaliyaan ilkaha caddaan. Haddii aad isticmaasho tuubo, dareeraha waa yar tahay in ay ku yimaadaan xiriir la dusha sare ee ilkaha. dareeraha ah ayaa la dhaafayo doonaa ilkaha oo waxaad tagtaa hunguriga.
TALO! Helidda iyo ilaalinta ilkaha cad, cadayo oo ilkaha dhexdooda aad maalin kasta baajin. Haddii aad taas samayn, waxaa laga takhaluso doonaa ilaa dhista ee huurada sababa midab ilig.
Waxa si fiican loo diiwaan xaqiiqda in qiiqa sigaarka soo saaray sigaarka discolors ilkaha mar walba oo aad neefsatid.
In la caddeeyo sameeyey by dhakhtarka ilkaha run ahaantii waxay ku xiran tahay sida ay si deg deg ah aad u baahan tahay natiijada, iyo sida xun ilkaha ayaa la wasakheeyey. In kastoo tani waxay noqon doontaa kharash badan, laga yaabaa inaad la dhakhso, Natiijada more cajiib ah oo aad ka heli laga yaabaa in iyada oo loo marayo farsamooyinka kale caddeeyo.
TALO! connoisseurs khamri Red, gaar ahaan kuwa si joogto ah waan mawalay, u muuqdaan in ay leeyihiin midab ilig. The midab khamri ah cas nuugo galay dhaldhalaalka ilkaha oo iyaga ka dhigaa inay madow.
cadeyga joogto ah oo la caddeeyo bleach ilkahoodiina way la yaab similar.You uma baahna in ay qaataan wax soo saarka ah oo aysan waxba ka beddelin isakaga ee ilkaha. Waxaad la lumin doonaa waqti iyo lacag aad in aanuu ku siin lacagta a.
Haddii aad sigaar cabto, markaas waa in aad joojiso in ay fursad kasta oo la caddeeyo ilkaha. A habka caddeeyo xirfadeed kharash xaddi weyn oo lacag ah. Haddii aad qabto nidaamka noocan oo kale ah ku sameeyey, ka dibna iftiin ilaa sigaarka, aad tuuro lacag iska. caddeeyo waxay si dhakhso ah loo beddeli doonaa by sigaarka.
TALO! Waa muhiim in la cadaydo, massage xanjo, iyo jeer xadhigga maalintii ugu yaraan. Cadayashada iyo findhicilashada socda fudud kasta oo hadhuudh ah ayaa kaa caawin kara ilkaha joogo cad.
Ilko xaqa aad u leedahay ka dib markii wax cunaya waa qayb muhiim ah oo ka hortaagan inay discoloring. Tani waxay xaqiiqdii waa run marka ay timaado kafeega.
Waydii dhakhtarkaaga ilkaha for gel ah in la caddeeyo aad u isticmaali doonaa guriga si iftiimin dhoolla. Habka Tani waxay ku lug ilkaha oo aad la siinayo saxaarad afka kaa buuxin doonaa gel iyo codsan in ilkaha for xaddi gaar ah oo waqti habeen kasta muddo dhowr toddobaad ah. Waxaa uu sheegay in farsamadan u caddayn karin dhoolla ilaa sideed midabo ifaya.
TALO! Haddii aad uur leedahay hadda, fogaadaan isticmaalaya nooc kasta oo ka mid ah waxyaabaha ilkaha caddeeyo! Waxyaabahani’ Cuntadan waxaa laga yaabaa in waxyeello u ilmahaagu sii kordhaya. cadeyga caddeeyo inta badan caadi ah in la isticmaalo waqtiga uurka, laakiin hubi dhakhtarkaaga ama dhakhtarka ilkaha si aad u hubiso.
Mid ka mid ah hababka ugu fiican ee si loo hubiyo in ilkaha by waa ay leeyihiin ballamo joogto ah booqashada dhakhtarka ilkaha si ay u nadiifiso.
Isku day inaad la isticmaalayo dawo luqluqasho in takhasusay caddeeyo. Waxay qaadan kartaa bilood inay natiijo hesho. luqluqdo waxaa ku jira kiimiko caddeeyo yeedhay hydrogenperoxid. Waa mid aad u fudud in ay isticmaalaan. Si fudud u raaci la laba jeer maalintii nus ah daqiiqadii ka hor inta aadan cadaydo ilkahaaga.
TALO! Findhicilashada waa muhiim. Findhicilashada ka caawisaa laga takhaluso huurada, taasoo keeni karta midab of ilkaha.
Cunista tufaax waa hab fiican si ay ilkaha siin khayaal ah in caddaan ay dhab yihiin. cuntooyinka iyo khudaarta callaaliska leeyihiin tayo ah hadal haynta in kaa caawin kara inaad nadiifiso ilkahaaga aan haysan si ay khasaaro badan ku dhaldhalaalka.
Caddeeya aanu u caddayn ilkaha jidkii hore-qabanqaabiyey by xoqeen ayay la geed walnut jilif. Khilaaf this on ilkaha si fiican iyaga nadiifiyaa oo iyaga ka dhigaa caddaan. U hubso in aad afkaaga ka soo raaci marka la isticmaalayo jilif, ka dibna cadaydo.
TALO! Ku adkeeya tiro badan oo cuntooyinka caanaha laga sameeyo. Foods sida caanaha, farmaajo iyo yogurt oo dhan waxay leeyihiin macdanta oo kaa caawin kara in aad siin xoog ah, ilkaha soo jiidasho leh oo aad dooni.
Waxaad codsan kartaa hydrogenperoxid in caddeeya aanu u caddayn ilkaha. Waxaad ku samayn kartaa si fudud by darsatid lagu dhaqo ama wax suuf kasta koosaarta u galay xalka. Xoq maro qoyan ka badan meelaha ilkaha ka dib markii aad u udrieen. haydarojiin ayaa la shaqayn doona si ay ugu fududaato Wasaqda iyo maradii ka caawisaa la istaajisaa.
Isticmaal caleemaha Baay iyo qolofka orange in la sameeyo budo wanaagsan. biyo dar budo iyo burush isku dhaf this. Waxa intaa dheer in ilkaha la caddeeyo, caawin doonaa si looga hortago cudurka ciridka iyo godadka.
TALO! jilif ka geed walnut ah waxaa loo isticmaali karaa sida whitener ilkaha ah. Khilaaf jilif guud ahaan meelaha ilkaha waxay u sahlaysaa in ay kor u Wasaqda iyo film hurdi ka ilkaha.
Haddii midabka ilkaha ee aad dhibayso, la tasho dhakhtarka ilkaha for fursadaha. dadka qaar ayaa u malaynaya caddeeyo ilkaha waa kharash ah aan waxtar lahayn, in kastoo haddii ilka off-midab bilaabo inuu saameyn sida aad ku nooshahay noloshaada, waxaa laga yaabaa inay u qalantaa, sababtoo ah waxaa u dhisi kari ilaa aad isku-kalsoonaanta.
Ka hor inta aadan isku dayin ilko caddeeyo on adiga kuu gaar ah, had iyo jeer hubi in aad marka hore la tashato dhakhtarkaaga ilkaha. Mararka qaarkood ilkahaaga gaaro dhiigga loo hagaajin karaa by dhaqmaadka nadaafadda ka wanaagsan. Waydii dhakhtarkaaga ilkaha oo ku saabsan suurtagalnimada of isticmaalaya waxyaabaha caddeeyo. Takhtarkaaga ilkuhu wuxuu kaala talin kara sida in afkaaga ku jiro xaalad ah in ay bilaabaan inay isticmaalaan noocyada alaabta. Suuska ama cudur cirrid oo kaliya uu noqon doonaa ka xun haddii aad isticmaasho ilkaha ah la caddeeyo alaabta iyaga on.
TALO! Waxaad u baahan tahay in ay ka fogaadaan qaxwada iyo shaaha haddii aad rabto in aad dhoola cad. Cabitaanka xaddi dhaafka ah kartaa, muddo, keeni xayd weyn.
Haddii aad rabto in aad ilkaha caddaan, codsan shulug Vaseline in ilkaha. Waxaa laga yaabaa in aysan haysan dhadhan wanaagsan, laakiin waxa ay ku siin doonaa ooday ilaaliya ilkahaaga iyo Wasaqda dhexeeya dhowr saacadood.
Ka dib marka aad cuni, xanjo qaar ka mid ah si ay u caawiyaan caddeeya oo aad ilkaha isaga nadiifiso. Qaar ka mid ah ciridka qaadka waxaa si gaar ah soo saaray in ay u caddayn ilkaha, iyo sidoo kale si ay u sii cad. ciridka Kuwani ciyaari maaddooyinka Xumaan-dagaalanka in ilkaha hayn doonaa dhalaalayay. xanjo sidoo kale soo saartaa candhuufta dabiiciga ah kuwaas oo caawin doona maydho kasta oo qayb ka cunto ka ilkaha.
ilkaha Yellow waa calaamad si fudud dareemi qof in sigaar cabba. Waxay noqon kartaa halkii ay adag tahay in la sii ilkaha dhoola cad haddii aad sigaar cabto. Haddii aad qabto in sigaar, waa in aad si xaqiiqo ah in la yareeyo inta aad sigaar cabto si ay uga faa'iideystaan ​​caafimaadkaaga iyo dhoolla.
Waydii dhakhtarkaaga ilkaha haddii uu ku siin karaa gel ah loo isticmaali karo ee xirmo caddeeyo guriga. Habkani u caddayn karin ilkaha by ilaa sideed midabo ifaya.
joogtada ah ilkaha
Haddii aad rabto in aad ilkahaaga in ay caddaan, Waa in aad leedahay ballamaha nadiifinta ilkaha oo joogto ah. nadiifinta ilkaha oo joogto ah waa in aad ka mid ah hababka ugu fiican ee ka mid noqon kara in ilkaha la caddeeyo mudada. Waxaad u baahan tahay inaad soo booqato dhakhtarka ilkaha ugu yaraan laba jeer sannadkii.
jel caddeeyo waxay diyaar u yihiin u caddayn ilkaha caddaan. Waxaad ka iibsan kartaa jel kuwan dukaamada daroogada iyo waxay ka jaban tahay is ilkaha Nuuri by ilkaha waa. Haddii ilkaha eegto caafimaad qabin ama aad discolored, waa in aad dhakhtarka ilkaha ugu horeysa ee.
ilkaha dul tooso Caday, iyo sida ugu dhaqsaha badan aad rabto in aad sariirta aado si aad u aragto ilkaha heli caddaan.
Luqluqasho dhab kor u qaadi kartaa midab ah ee ilkaha discoloration.Ask dhakhtarka ilkaha haddii aad qabto ilkaha u adkeysan kara saamaynta isticmaalaya dawo luqluqasho.
hydrogenperoxid ma aha jidkii nabdoon oo ay ku caddeeya aanu u caddayn ilkaha. Waa ammaan ahayn oo run ahaantii ka tagi karo ilkaha si uu u noqdo sii discolored. Iska ilaali dhamaan waxyaabaha in uu leeyahay hydrogenperoxid haddii ilkaha ma caafimaad oo ku filan.
Waxaa si weyn lagu talinayaa in aad ilkahaaga Nuuri kahor intuuna silig braces.You noqon doonaa cadahay marka aad aragto dhoolla cusub tan iyo waa dhoola straighter iyo hagaagay!
Ilkaha isticmaali kartaa walxaha bleaching xirfadeed oo ay la socdaan nalalka gaar ah u caddayn karin ilkaha sida ugu badan ee 15 midabo si dhakhso ah. Noocan habka caadiga ah ku kici doona ku dhawaad ​​shan boqol oo doolar fadhiga a.
Haddii ilkaha joogto ah u eeg caajis ama jaalle ah, fiirso haddii cabitaanka aad ugu jeceshahay ayaa laga yaabaa in lagu eedeeyo. khamriga cas iyo kafeega lagu yaqaan inuu jebiyo ilkaha. Isticmaal dhuun ama tuubo markii cabitaanka si aad u xaddido waqtiga aad xiriir la ilkaha xiriir.
Dhig cadayga strawberry gaar ah cadaydo. Jordgubbe waa saamayn caddeeyo on ilkaha. Si qas ilaa Jinka qaar naftaada, isu geeyo biyaha (1/4 cup), baking soda (1/2 cup) iyo saddex strawberries in la soo shiiday.
Waxaad samayn kartaa ilkaha leeyihiin muuqaalka ah caddaan by xiran midabka lipstick Hooska haboon. lipstick Bright cas dhigi doonaa ilkaha discolored sababta oo ah waxay u muuqdaan doonaa si loo eego madow. The midabada ugu wanaagsan ee ilkaha discolored waa pinks ama midabo qaawan.
Helitaanka ilkaha cad aad rabto in aad noqon karaan kuwo qaali ah iyo xoogaa of gumaarka ah. Waxaa jira habab badan oo la heli karo si loo caawiyo in aad dadaalka dhaco ilkaha caddaan. Codso talooyin halkan bixiyey, si aad u caddayn karin ilkaha oo aan qaadan hanaanka sameeyey xirfad la joogo dhakhtarka Ilkaha.
Posted by Guide Ilkaha caddeeya aanu u caddayn - June 5, 2016 at 12:44 AM
Categories: Caddeeya aanu u caddayn Talooyin Ilkaha Tags: Smile yaabtid, yaabtid Smile, ilko caafimaad, ilkaha huruud ah, Vitamin C